श्रीमतीको काज किरिया गर्दै पाठक, छोरीले दिँदैछन् साथ – ईमेची डटकम
श्रीमतीको काज किरिया गर्दै पाठक, छोरीले दिँदैछन् साथ
Posted byइमेची संवाददाता September 22, 2019 October 30, 2019 Leaveacomment on श्रीमतीको काज किरिया गर्दै पाठक, छोरीले दिँदैछन् साथ
हिन्दू परम्परा अनुसार श्रीमतीको निधन हुँदा श्रीमानले काज किरिया (दशगात्र कर्म) गर्नु पर्दैन भन्ने मान्यता छ । तर, झापाको कनकाई नगरपालिका– ५ टेक्रा निवासी ३७ वर्षीया अमृता पाठकको निधन भएपछि दशगात्र कर्ममा बसेका उनका श्रीमान् दीर्घराज पाठक बीचमा छोरी अंकिता र जेठानी दिदी तुलसा । तस्वीर : सुरेन्द्र भण्डारी
हाम्रो समाजमा श्रीमानको मृत्यु भयो भने श्रीमती सेतो वस्त्रमा १३ दिने किरिया बस्ने, ४५ दिन वा एक वर्षसम्म सेतो कपडा लगाउँछन् । तर विडम्बना, सँगै मर्ने, सँगै बाँच्ने वाचा बाँधेर विवाह बन्धनमा बाँधिएका श्रीमानले भने १३ दिनको किरिया पनि बस्नु नपर्ने रे ! छोरा भए छोरा र छोरा पनि नभए मीतछोरा वा अन्य परिवारका सदस्यले किरिया गर्ने तर श्रीमानले श्रीमतीको किरिया नगर्ने कस्तो विभेदकारी नीति होला ? श्रीमानको किरिया श्रीमतीले गर्नुपर्ने तर श्रीमानले गर्न नपर्ने लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।
कतिपयले त श्रीमतीको निधन भएको ४५ दिन पनि नपुग्दै दोस्रो विवाह समेत गरेको देखिन्छ । तर, झापाको कनकाई नगरपालिका– ५ टेक्रा निवासी दीर्घराज पाठकले भने फरक उदाहरण देखाएका छन् । उनकी ३७ वर्षीया अमृता पाठकको निधन भएपछि उनी १३ दिनको पुण्यकर्ममा बसेका छन् । उनी आफ्नो छोरी र भाउजुसंगै श्रीमतीको काजकिरिया बसेका हुन् । श्रीमातीको निधन भएपछि दशगात्र कर्ममा बसेका उनको कामलाई गाउँमा उदाहरणीय भन्दै प्रशंसा गरिएको छ ।
Posted byइमेची संवाददाता September 22, 2019 October 30, 2019 Posted inब्यानर न्यूज
ओम अस्पतालमा पत्थरीको अप्रेसन गर्दा फेरि एक युवतीको ज्यान गयो